Rugby – Fifanintsanana Olympika (JO 2021): mpilalaon’ny Makis 4 bevohoka najanona tsy hilalao - ewa.mg
Rugby – Fifanintsanana Olympika (JO 2021): mpilalaon’ny Makis 4 bevohoka najanona tsy hilalao
News - Rugby – Fifanintsanana Olympika (JO 2021): mpilalaon’ny Makis 4 bevohoka najanona tsy hilalao
Eo am-piomanana ny
fiverenana an-kianja, amin’izao fotoana izao, ny Makis de
Madagascar, sokajy vehivavy. Hanomana ny fiadiana ny tapakila
hiatrehana ny lalao Olympika (JO 2021). Misy anefa ireo mpilalao
Raha tsy misy ny fiovana, hanomboka
amin’ny zoma 18 septambra ho avy izao, ny fanazarantenan’ny Makis
de Madagascar, sokajy vehivavy eo amin’ny rugby lalaovin’olona 7.
Mpilalao 21 mirahavavy no nantsoina voalohany ka rehefa avy nandalo
fitiliana ny valanaretina “covid 19” sy “test de grossesse”,
fantatra fa nisy efatra mirahavavy mitondra vohoka ka voatery
Manoloana izany, nosoloina izy ireo
ka nantsoina hanatevina ny Makis indray Raveloarinoro Mbolatiana
Dinah, avy amin’ny 3FB sy Rasoanandrasana Volatiana Marie Fleuris,
mpilalaon’ny FTFA ary i Oliniaina Fabrinah (Corra), an’ny FTM
Manjakaray. Efa nandrafitra ny Makis ho an’ny rugby lalaovina olona
15 izy ireo.
Tsy hijanona amin’ireo ihany fa
mbola hisokatra amin’ireo mpilalao hafa ny Makis ka mety hisy avy
any amin’ny faritra ho antsoina amin’ny herinandro ambony.
Ankoatra izay, salama avokoa ireo
mpilalao nantsoina satria miiba ny valin’ny fitiliana natao ka tsy
misy mitondra ny valanaretina “covid 19”, izy rehetra. Tsiahivina
fa hanoman-tena amin’ny lalao famerenana “repêchage”,
hiadian-toerana hiatrehana ny lalao Olympika (JO 2021) ny
Makis de Madagascar. Fihaonana, hotanterahina amin’ny volana mey
2021. Hateto, tsy mbola hay izay firenena hampiantrano izany.
Mialoha ny hiatrehan’ny Makis ny
fanazarantena, nodiovina sy notondrahina fanafody, nanomboka omaly
talata, ny kianja Makis Andohatapenaka. Anisan’izany ny efitrano
fibatana fonjamby, ny kianja, ny “gradin”, ny “tribune” ary ny
tokotany rehetra manodidina sy ny vavahady fidirana.
Tsiahivina fa tsy maintsy manaja
ireo fepetra ara-mpahasalamana avokoa ireo mpilalao na manao
L’article Rugby – Fifanintsanana Olympika (JO 2021): mpilalaon’ny Makis 4 bevohoka najanona tsy hilalao a été récupéré chez Newsmada.
Kandidà Feno sy i Bodo: “Hifampizara ny manahirana isika”
Nitohy tamin’ny alalan’ny fitsangantsanganana teny Anosy Avaratra ny fihaonan’ny kandidà Feno sy i Bodo etsy amin’ny boriborintany III. Nahatonga solontena avokoa ireo fokontany miisa 34. “Ndao hiara-kiasa isika. Hiara-kiisalahy… Mafy ny fihavanantsika. Ataonay ahoana ny hanome lamosina ny fitarainanareo”, hoy izy ireo nanoloana ireo vahoaka tonga teny an-toerana. Nambaran’ireo nandaha-teny sy ireo mponina efa nihaona mivantana tamin’ny kandidà fa zanaky ny tanàna i Bodo. “Mahalala ny lesoka sy ny vahaolana. Fantany ny hetahetan’ny vahoaka eto”, hoy izy ireo.Notsiahivin’i Bodo tamin’izany fa niaraka amin’ny mponina eny hatrany izy. Nifampizara, nifampitsinjo ary mbola hiaraka hatrany. “Maro ireo namako fony fahazaza. Tao ireo nitaiza ahy. Tanànako ny boriborintany III, indrindra fa Ambohibary Antanimena. Mbola ireo ny namako niara-nilalao vovoka tamiko… Rasoa nitaiza ahy. Noraisinareo aho. Nihaino anareo. Nohainoinareo… Mbola maro ianareo ny niaraka tamiko teo amin’ny fanasan-damba tamin’ny mbola kely. Tazako tery ampita sy nanantona ahy koa i maman’i Titi. I Bodo sy i Noro, teo foana. Nahoana moa ny tsy hifampizara ny manahirana isika?”, hoy izy. Naneho fahavononana ireto kandidà ireto fa hifanakaiky ary hifampitantana amin’ireo vahoaka, ho amin’ny fiaraha-miasa. “Ny maharary ny vahoaka, marary anay… Rehefa tia dia tena tia”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Kandidà Feno sy i Bodo: “Hifampizara ny manahirana isika” a été récupéré chez Newsmada.
Toliara: hazo sarobidy tratra tao amin’ny Indosuma
Araka ny loharanom-baovao avy any amin’ny foibem-paritry ny Ala sy ny tontolo iainana (DREF) any Atsimo Andrefana, nahatrarana hazo sarobidy voamboana, sy hazo tsotra maro tao amin’ny efitrano iray an’ny orinasa Indosuma, any Mitsinjo Toliara.Niteraka resabe any an-toerana ity raharaha ity ary fantatra fa nogiazana, nohidin’ny tompon’andraiki-panjakana, ilay efitrano nahitana ireo hazo ireo.Manao ny fanadihadiana lalina ny foibem-paritry ny Dreef Atsimo Andrefana, amin’izao fotoana izao. Hampiakarina any amin’ny fitsarana ny raharaha rehefa hita ny lafiny tsy ara-dalàna.Tsy vao izao ny nahitana fandripahana tsy ara-dalàna ny hazo any amin’iny faritra tapany atsimo andrefan’ny Nosy iny. Vao notaterina teto tsy ela ny fanapotehana, ny fanaovana saribao sy ny fambolena any anaty faritra arovana any amin’ny alan’Antimena, faritra Menabe. Toraka izany koa ny any Vohibola Brickaville. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana, indrindra ny ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala, misahana voalohany ny fiarovana ny harena voajanahary eto amintsika satria fanamby lehibe ny nataon’ny filoham-pirenena ny handrakofana ala an’i Madagasikara.Njaka A. L’article Toliara: hazo sarobidy tratra tao amin’ny Indosuma a été récupéré chez Newsmada.
Solo Andrianasolo, un monument de la musique malgache. La scène malgache commence à se réveiller de sa torpeur, Solo Andrianasolo sera ainsi sur la scène du Karibotel, plus précisément au restaurant Twenty–Six, Analakely le 6 septembre dans le cadre d’un buffet en famille à partir de 12 h 30 jusqu’à 15 h. Une bonne nouvelle pour les mélomanes, mais aussi un événement servant de baromètre pour l’avenir de ce secteur. C’est sûr que ce grand musicien aura toujours des inconditionnels voulant réentendre les « Isaky », « Ho zakaiko», « Ny lasako », etc… Un rendez-vous sous le signe de la convivialité, puisqu’il s’agit d’un buffet familial. Comme il s’agit d’allier plaisirs de la table et de la scène, le menu proposé variera la terre et la mer. A titre d’exemple, en guise d’entre froide, les gourmets pourront s’essayer au « Poisson belle vue», ou encore à l’« akoho gasy sauce ». Un peu de sophistication et du terroir dans les assiettes. Il est temps que la scène musicale tananarivienne revienne à ses bonnes habitudes. Toutefois, le respect des consignes sanitaires est de rigueur au risque de faire reculer de nouveau la situation. Il est plaisant de penser que le mois de juin sera l’année du redémarrage des cabarets et des petites salles de la capitale. Maminirina Rado L’article Karibotel Twenty Six : Solo Andrianasolo investit septembre en brunch est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Karibotel Twenty Six : Solo Andrianasolo investit septembre en brunch a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fisamborana nahery vaika :: Matin’ny fokonolona ireo telo lahy namana sefo fokontany
Voasambotra, tamin’ny herinandro lasa teo, ireo noahiahiana tamin’ny fanafihana niharo famonoana mpianaka, tany Ambalavero, distrikan’i Manakara. Notoherin’ireo voampanga ny fokonolona izay nisambotra azy. Vokany, namoy ny ainy ny lehilahy telo voatondro ho jiolahy. Azo sambobelona ny lehiben’ny fokontany iray voalaza fa naman’izy ireo. Nafindra toerana haingana ho fiarovana azy amin’ny fitsaram-bahoaka sady hatao famotorana io sefo fokontany io. “Nanonona anaran’olona voatondro ho namono an’ireo mpianaka ny fianakaviana. Tratra ireo noahiahiana, omaly (Ndrl: afak’omaly). Lehilahy telo no voasambotra niaraka tamin’ny lehiben’ny fokontany iray, izay efa saika hitsoaka. Nanohitra sy namaly an’ireo fokonolona kosa izy telo lahy. Naratra ny dimy tamin’ ny fokonolona. Maty noho ny ratra nahazo azy izy telolahy”, araka ny fanampim-baovao avy amin’ny zandary any Manakara. Niara-nisalahy tamin’izao fisamborana izao ny andrimasom-pokonolona sy ny “Kalòny” na irony mpiambina eo an-tanàna irony ary ny fokonolona. Tsiahivina fa lehilahy lehibe, 73 taona, sy ny lehilahy iray zanaky ny mpiray tampo aminy no namoy ny ainy voafirafira tamin’ny antsibe, tany Ambalavero, tamin’ny alin’ ny alakamisy 27 aogositra lasa teo. Voaroba ihany koa ny vola 260 000 ariary sy vary 50 kapoaka, akanjo maromaro ary entana hafa tao an-tranon’izy ireo. L’article Fisamborana nahery vaika :: Matin’ny fokonolona ireo telo lahy namana sefo fokontany est apparu en premier sur AoRaha.
Ny nisongadina tamin’ny fihaonan’ny Barea sy ny Gineana
Ireo baolina maty nandritra ny fihaonan'ny Barea sy ny Gineana tamin'ny 22 Jona 2019. 2 - 2 no isa nisarahana tamin'io lalao io. Ny Gineana no nanokatra ny isa tamin'ny alalan'i Sory Kaba tamin'ny minitra faha 34 tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Nosalahan'ny Malagasy ny isa tamin'ny minitra faha 49. I Anicet Abel no nampiditra ny baolina taorian'ny corner nodakan'i Carolus Andrea (Charles Andriamanitsinoro). Enina minitra taorian'io dia nampian'i Carolus Andrea ny isa ka lasa 2 - 1. Tamin'ny minitra faha 66 no nanasahala ny isa i François Kamano tamin'ny alalan'ny Penalty. Misaotra Barea. Miara Mirona. Alefa Barea
Nitombo 50% ny marary manatona toeram-pitsaboana tsy miankina
Nitombo 50% ny isan’ny marary tonga mizaha fahasalamana eny amin’ny toeram-pitsaboana tsy miankina raha mitaha amin’ny zava-misy nialoha ny nisian’ny Coro­navirus teto amintsika, araka ny fanazavan’ny mpitsabo iray. Sery, kohaka, gripa sy fanaviana no antony hanatonan’ny olona ny tobim-pahasalamana ary ny olon-dehibe no maro an’isa. Mahazo vahana ny gripa amin’izao fotoana mampidina ny maripana izao ka tokony hitandrina ny rehetra, indrindra ireo manana aretina mitaiza amin’ny taovam-pisefoana. Raha misy olona ahina mampiseho soritraretina Co­ro­navirus, asaina manao fitiliana PCR izy ireo ary atomboka avy hatrany ny fitsaboana fa tsy miandry ny valiny izay mety ho 15 andro aty aoriana mihitsy. Mandray ny marary rehetra tonga ny mpitsabo fa manaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana ary mampiasa EPI hiarovan-tena na mampitombo ny vola mivoaka aza izany. Ho fisorohana ho an’ny olona tsy mbola voan’ny sery sy ny gripa, tsara ny mihinana ny sakafo ara-pahasalamana ary miezaka matory ora 8 isaky ny alina. Zava-dehibe koa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra napetraky ny fanjakana hitandroana ny tsy hahazoana ny tsimokaretina samihafa ankoatra ny Covid-19.Vonjy A.L’article Nitombo 50% ny marary manatona toeram-pitsaboana tsy miankina a été récupéré chez Newsmada.
Fomba mahomby hanimbana ny teny malagasy: mila mitandrina amin’ny fampiasana ny “facebook”
Toa zary lasa mahazatra ny Malagasy ny mahita ny teny malagasy diso fanoratra ao anatin’ny “facebook”. Vitsy dia vitsy ny manitsy ny diso fa mitazam-potsiny ny ankamaroany. Nahitsy be kosa ny fanehoan-kevitra nataon’i Arikaomsa Randria, omaly. “Ity FB ity no fomba mahomby indrindra hanimbana ny fomba fanoratra teny malagasy”, hoy izy. Ankoatra ireo fanafohezan-teny teraka noho ny hakamoana, mbola ao ihany koa ireo mpanao tandrametaka amina fanoratana ny teny malagasy amina fomba fiteny vahiny. Tahaka ny “olona” manjary “oul”, sns.Mila mitandrina fatratra amin’ny fampiasana ny teny malagasy ifaneraserana sy ifampitan-kevitra ao anaty “facebook” ny Malagasy. Maro loatra ny fahadisoana tazana amin’ny teny malagasy ao anatin’izany tambajotran-tserasera anisan’ny be mpampiasa indrindra eto ambany masoandro izany. Raha vao miparitaka sy mivelatra be tahaka izany anefa ny sehatra itenenana na anoratana, mila mitandrina ny tsirairay!Mety ho azo adika ho tsy fahafehezana ny tenindrazana ihany koa ny fitobahan’ireny fahadisoana amin’ny fomba fanoratra ny teny malagasy any anaty “facebook” ireny. Tranga mahamenatra manoloana ny “fandrosoana”. Ny toknolojia sy ny fampiasana azy, ilingiligiana kanefa ny tenin’ny tena alefa ao anatiny, diso avokoa ny ankamaroana. Mihaingo ambony tsikoko!HaRy RazafindrakotoL’article Fomba mahomby hanimbana ny teny malagasy: mila mitandrina amin’ny fampiasana ny “facebook” a été récupéré chez Newsmada.
Minisitry ny Fitsarana : “Entina eo anatrehan’ny fitsarana ny depiote Leva”
“Raha tsy diso aho, androany (omaly) izy no entina miseho eo anatrehan’ny tonia mpampanoa lalàna. Misy ny fiampangana hahazo azy, na fanatanterahana ny fitsarana miandry azy, na fanatanterahana ny fitoriana izay ataony any ambadika any. Tsy fantatra izany.”Io ny nambaran’ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny Richard, teny Anosy omaly, momba ny raharaha mahakasika ny solombavambahoaka tany Mahabo, faritra Menabe, teo aloha, Raveloson Ludovic na i Leva, nokarohin’ny fitsarana nanomboka ny febroary 2020.Miara-miandry ny vokatry ny fitsarana ny rehetra: inona no hataon’ny fitsarana, inona ny ho tohiny, aiza ho aiza any raharaha? Raha maneho hevitra miteny io solombavahoaka teo aloha io: milaza ny lalàna ny fahafahana mivoaka na miteny, arakaraka ny zava-mitranga raha voatana. Hatramin’izao aloha, andraikitr’izay mitana azy mamela azy hiteny na tsia.Ny hoe manana fahadisoana izy sa tsia? “Aleo isika tsy handany andro ny amin’izay, fa ny zava-mitranga aloha: nandositra izy, hita, tratra, entina miverina eo anatrehan’ny fitsarana hijerena ny momba azy na ny tsy maintsy anenjehana azy”, hoy ny minisitry ny Fitsarana. Ny mpampanoa lalàna ny mahafantatra izay hanaovana ny raharaha.R.Nd. L’article Minisitry ny Fitsarana : “Entina eo anatrehan’ny fitsarana ny depiote Leva” a été récupéré chez Newsmada.